Ahoana ny fomba hamohana ny mini Samsung Galaxy maimaim-poana | Androidsis
Ahoana ny fomba hamohana Samsung Galaxy mini tanteraka maimaim-poana
¿Ahoana no hahafantarana raha maimaim-poana ny finday? Amin'ity lesona manaraka ity dia hanazava aminao amin'ny fomba tsotra sy malalaka aho, ny fomba hamohana Samsung Galaxy mini, na fantatra koa amin'ny hoe GT-S5570, mba hahafahantsika mampiasa azy io amin'ny mpandraharaha mifanaraka amintsika indrindra.
Tamin'ny tutorial teo aloha dia nasehoko anao Ahoana ny fomba hamohana ireo terminal Samsung be mpampiasa amin'ny alàlan'ny Galaxy unlockMampalahelo fa tsy mifanaraka amin'ny Samsung Galaxy Mini, izany no antony mahatonga an'ity fampianarana vaovao ity, izay azonao ao anatin'ny minitra roa, alefaso ny mini Samsung Galaxy mba hahafahanao mankafy azy amin'ny mpandraharaha tadiavinao.
1 Fanambarana lehibe
2 Fanomanana ny mini Samsung Galaxy
3 Famoahana ny terminal
Ny fahavitan'ity fampianarana ity, hanafoana ny fiantohana ny terminal anaoKa raha vao nividy azy ianao dia eritrereto tsara izay ataonao ary raiso ny andraikitrao amin'ny zavatra ataonao.
Mila manana isika nampiditra karatra fitadidiana micro-usb mandritra ny dingan'ny fahazoana ny mamaha ny code.
Fanomanana ny mini Samsung Galaxy
Ny zavatra voalohany tokony hataontsika, hamaka ny mini Samsung Galaxy, satria hanatanterahana an'ity lesona manaraka ity dia tsy maintsy mihodina amin'ireo rakitra anatiny ao anaty telefaona isika, ary noho izany dia tsy maintsy manana alalana superuser isika.
Raha vantany vao azontsika tsara ny terminal miorim-paka, Hampidina ny rindranasa Android Terminal Emulator avy amin'ny Play Store izahay, izay ny fampiharana izay hanafahanay ny Samsung Galaxy Mini amin'ny fomba maimaim-poana tanteraka.
Hanao ny dingana mamoha amin'ny alàlan'ny baiko maromaro isika hiditra amin'ireo rakitra anatiny ao amin'ny terminal anay ary alao ny kaody mamoha izay hamela antsika hamaha ny fitaovantsika.
Tena ilaina izany adikao ireo baiko rehefa ampiarahiko izy ireo, manaja ireo habaka sy ireo famantarana ortografika rehetra.
Famoahana ny terminal
Hosokafanay ny rindranasa izay vao nosintoninay Play Store, ary tsy iza izany fa ny AndroidTerminal Emulator.
Manaraka izany dia hampahafantarinay izao baiko manaraka izao:
su ary hoterentsika ny lakile Midira, miaraka amin'ity dia hiseho ny efijery iray izay manontany antsika alalana superuser, hanaiky ny hanome ireo tombontsoa fakany amin'ny fampiharana izahay, ary hanohy ireto baiko manaraka ireto.
cd / sd karatra
mount -o nosuid, ro, nodev -t vfat / dev / block / stl5 / sdcard / hamaha
Ankehitriny eo amin'ny efijery ny terminal anay, dia haseho isa lava be mifarana amin'ny zerô maro isika, zavatra toy izao: 692457 # 9727481700000000000000000000000.
Haka tahaka tsara an'io kaody io izahay, satria ny ampahany amin'izany dia ilay hampiasainay hatramin'ny farany mamoha ny mini Samsung Galaxy. (tsy mila maka tahaka ny zerô).
Hofaranantsika miaraka amin'ny AndroidTerminal Emulator manoratra ireto baiko manaraka ireto:
umount / sdcard / mamoha
rm -r mamoha
Ankehitriny Samsung Galaxy mini dia hiverina indray, ary raha vao miasa tanteraka izy io, hanova ny karatra SIM tany am-boalohany izahay amin'ny iray amin'ireo mpandraharaha iray hafa, homarihinay ny PIN de SIM amin'ny fanontaniana ary fisehoan-javatra vaovao hiseho amintsika mangataka ny kaody mamoha kaody.
Ankehitriny dia horaisinay ny isa izay nosoratantsika teo aloha, fa ireo tarehimarika valo farany tsy anisany zerôs, noho izany amin'ny isa voalohany, 692457 # 9727481700000000000000000000000.
Hesorinay daholo ny zerô, ary avy amin'ny isa vokariny no tokony horaisinay ny isa valo farany, toy izany:
Ny ampahany maloka dia sahy ny kaody mamoha avy amin'ny terminal anay.
Hampiditra ny kaody mamoha ao amin'ny Samsung Galaxy Mini, ary na dia namerina lesoka aza izy io dia efa nanokatra ny terminal tsara izahay, raha te hanamarina izany dia afaka manandrana manao antso an-tariby.
Fanazavana fanampiny - Ahoana ny famohana Samsung Galaxy S sy Samsung Galaxy SII amin'ny Galaxy S Unlock, Ahoana ny fomba hanonganana ny terminal Android anao amin'ny SuperOneClick
Ampidino - Android Terminal Emulator maimaim-poana
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Samsung » Ahoana ny fomba hamohana Samsung Galaxy mini tanteraka maimaim-poana
235 hevitra, avelao ny anao
jairosny5 dia hoy izy:
Tena tsara!! Misaotra betsaka ary nanazava tsara !!
Valiny amin'i Jairosny5
Misaotra anao compi.
Faly aho fa nanampy anao
paul paul dia hoy izy:
Mahazo aho rehefa apetrako ny baiko tsy hita sy rehefa apetrako ny tendrombohitra…. Mametraka ny mount: opperation tsy azo atao ary rehefa apetrako ny saka dia tsy mametraka rakitra na lahatahiry izany amiko. Kalgien afaka manampy ahy !!!!
Valiny tamin'i Pablo Pablo
Izany dia satria tsy mpampiasa root ianao ary tsy manana alalana manokana, alohan'ny hanohizanao ity fampianarana ity dia tsy maintsy hongotanao ny terminalo.
Hacknorduk dia hoy izy:
Salama amin'izao fotoana izao dia manaraka ny dianao aho fa tonga amin'ity #chmod 555 ity
# mount-o: tsy hita
misy hevitra tsy mety ataoko
Mamaly an'i Hacknorduk
Supergataco dia hoy izy:
Miala tsiny, fa tsy mahazo ny efijery hametrahana ny teny miafin'ny tambajotra. Manomboka ny finday rehefa apetrako eo aminy ny pin, saingy tsy mangataka ny lakilen'ny famohana izy. Nahavita ny dingana in-20 aho. Miorim-paka tsara izy io, manana rom izay tsy Cyanogen (novakiako fa amin'ny romana Cyanogen dia tsy hivoaka ny efijery). Tsy hitako izay hatao. Ny finday miaraka am-boalohany ny Movistar raha miasa tsara. Fa tsy misy na inona na inona, tsy mivoaka ny efijery ny lakilen'ny famohana.
Mamaly an'i Supergataco
Salama, vao haingana aho no nividy an'ity telefaona finday ity ary mametraka padlock eo afovoany amin'ny efijery hidin-telefaona izy ary amin'ny lafiny iray dia manamafy ahy izany ary amin'ny tranga hafa tsy hitako izay hatao.
headofmoney dia hoy izy:
Salama tsara, misaotra betsaka anao tamin'ny fandraisana anjara, saingy manana olana aho ary azoko tsara ny laharana vitako tsara ny zava-drehetra fa rehefa mamadika ny telefaona miaraka amin'ny sim an'ny mpandraharaha hafa aho dia tsy mahazo ny efijery hiditra ny kaody , misy hevitra?
Mamaly an'i Headofmoney
Ary inona no azonao?, Ampidiro tsara ny rafitra fiasa?.
Miezaha miantso raha mitady anao izy hanao izany.
Raha lasa ara-dalàna dia tsy mangataka ny kaody mamoha ary rehefa miantso ny dingana mahazatra dia arahana fa apetraka avy hatrany ny antso
Ny hany zavatra azoko eritreretina dia ny manolo ny sim original ianao, miantso ary avy eo ovao ho an'ilay iray hafa.
Raha tsy mety aminao izany dia avereno indray ny fomba fandinihana manokana ireo dingana rehetra, aza manome anao hadisoana izay tsy voamariky.
izay mandeha namana tsy miasa intsony ary tsy miantso amin'ny carte vodafone
hey, fantatrao ve raha misy fomba hanafoanana ny fizotrany fa tsy mivoaka ny efijery mamoha ary tsy mandeha amin'ny sim voalohany, na angamba misy fomba hamerenana ny rafitra fiasa na zavatra toa izany, hamafa ny zava-drehetra ary mametraka indray rom, mila zavatra izay aho dia efa nanandrana ny zava-drehetra ary tsy misy zavatra mety amiko
Tsy maintsy mandrehitra rom am-boalohany ianao, eo amin'ny pejy sammobile.com manana ny fitaovana ilaina rehetra, ao anatin'izany ny mpamily.
Ny nanjo anao dia satria tsy narahinao ny fizotrany araka ny nolazaiko anao, na nanao hadisoana ianao rehefa niditra baiko.
Havaozina ny firmware, hiezaka aho ary hametraka roma sasany ary tsy misy na inona na inona mbola tsy mandeha amin'ny karatra voalohany, toy ny hoe nanakana ny karatra ho azy izy, ny tranga dia miseho ireo marika fandrakofana fa vantany vao manao miantso azy dia tapaka aloha alohan'ny hanombohana, angamba azonao atao ny mampiditra baiko amin'ny emulator android hahazoana ny efijery hanalana ny hitsoka, marina
Valiny amin'ny headofmoney
Inona no nataonao mba tsy hiseho ilay 0123465789012346?
grabidc dia hoy izy:
Voavaha ny olana? Zavatra mitovy no nanjo ahy!
fa hanavao ny firmware aho, ary manandrana mametraka romsy
tsy misy tsy mandeha na dia amin'ny karatra voalohany aza, toy ny hoe
hanakanana ho azy ny karatra, ny tranga dia miseho ireo marika
fandrakofana fa raha vao miantso ianao dia tapahina alohan'ny hanombohana,
angamba azonao atao ny mampiditra baiko amin'ny emulator android izay
mba hivoahan'ny efijery hamaha, sa tsy izany?
Averiko tsara tokoa ny fizotra rehefa miditra amin'ireo baiko samihafa
Efa naveriko in-3 izy ity ary mandeha tsara ny zava-drehetra, rehefa mivoaka ny isa dia mametraka ahy 01234567012345670123456701234567 # ary dia mijanona ho toy izany tsy misy miala amin'ny efijery hanokatra
Tsy afaka mieritreritra izay holazaiko aminao bebe kokoa aho, mankanesa ao amin'ny menio fanovana ary manaova famerenana amin'ny orinasa, avy eo manandrama mametaka rom vaovao miaraka amin'i odin.
Ilay namana mitovy, mitovy daholo ny zava-drehetra, heveriko fa zavatra nikitika ilay rafitra tamin'ny fampiharana emulator android aho, tsy azonao atao ny mampiditra baiko hampiakatra ny efijery hidiranao ny kaody hidy?
Izay fantatro fa tsy namana, fa hijery manodidina aho, ary raha mahita zavatra aho dia holazaiko anao.
Avereno ao anaty ilay sim voalohany ary miantso, dia avereno ao ilay sim hafa ary zahao raha mangataka kaody izy raha tsia, andramo indray ny miantso.
Raha tsy mety aminao izany dia avereno indray ny dingan'ny famohana, ary diniho manokana ireo dingana rehetra.
Marc8slg dia hoy izy:
Salama, vitako ny fampianarana manontolo ary raha ny tokony ho izy dia nandeha tsara ny zava-drehetra ary nahazo kaody iray nitovy amin'ilay napetrakao tao aho, ny zavatra ratsy dia tsy afaka mamerina ny telefaona ny telefaona ary tsy mijanona ny jiro sy ny fanidiana. fa raha tsy tena manomboka. Misy mahalala ve ny zava-nitranga ???
Mamaly an'i Marc8slg
Inona no azoko atao hamahana izany ???
Mirehitra ny efijery ary afaka mamaky samsung ianao fa mikatona eo noho eo hiverina indray afaka roa segondra. ary mijanona ho toy izany foana. Tsy hitako izay hatao !!!!
Ny zava-nitranga taminao dia satria tsy narahinao ny fizotrany araka ny nolazaiko anao, na nanao hadisoana ianao tamin'ny baiko sasany, efa namoaka terminal mihoatra ny roapolo miaraka amin'ity rafitra ity aho ary miaraka amin'ny fahombiazana ary tsy misy olana.
Nahavita nanafaka azy ny lehilahy ... Nasaiko tany Movistar (Peroa) izy ary nametraka Sim avy any Claro (Peroa) Nandeha tsara ny zava-drehetra; Niantso aho ary nahazo antso, nandefa sy nandefa hafatra; fa tsy naharitra adiny iray dia napetrany aho: Fiantso vonjy maika fotsiny? Fa inona ity? Ampio aho.
PD: Indraindray lasa Claro; fa manandrana miantso aho dia mivoaka. Tsy misy ny tamba-jotra = S
Misy vahaolana ???
Maimaimpoana 100% ny ekipa manaraka ny dianao.
Misaotra betsaka jhehe misaotra toi efa nitahiry 15 euro aho satria nomeny vola ny famotsorana azy
Mamaly an'i Rtad
Faly manampy anao.
manu08gordon dia hoy izy:
Nosintomiko tamin'ny programa fivarotana ilay programa ary rehefa miditra ny command su dia milaza amiko fa tsy hita aho
Mamaly an'i Manu08gordon
Misy miorim-paka ve?
Chus dia hoy izy:
Eny, namaka izany aho nefa tsy nisy olana.
Mamaly an'i Chus
Mobile dia hoy izy:
Tsy haiko raha tsapanao fa nanodikodina olona maro ianao, mieritreritra aho fa misy telefaona 2 afaka ary mihoatra ny 100 no maty tamin'ilay andrana, satria tsy mamafa ny helo ity tutorial farting ity ianao satria handeha ianao hanohy handoro ny telefaona ho an'ny rehetra, ho an'izay afaka, tsy manome namana na inona na inona ianao ary ho an'ireo izay maty dia manao hadalana ianao ary tsy mametraka na inona na inona na mamela anao ho afaka 20 ianao ary mandeha 10 izy ireo, toa hitako fa fantatrao ambany noho ny noba vao naka finday! !!
Mamaly an'i Movilmuerto
Tsy fantatro izay fomba tokony holazainao, fa hey, raha manohy miaraka amin'ny Tuto amin'ilay taratasy ianao, dia manome toky anao aho fa mandeha izany.
Ho fanampin'izay, tompon'andraikitra amin'ny asany ny tsirairay, ary raha tsy azonao antoka fa fantatrao na vitanao izany dia aza atao izany.
Tamin'ny 06/09/2012 06:39 PM, «Disqus» nanoratra:
Na ny güevos an'ny Arzantina aza dia hoy izy:
Nasian'izy ireo basy ny tratranao mba hanaovanao izany? Ankasitrahany ny fotoana laniana amin'ny fanolorana vahaolana sasantsasany, mahomby kokoa na latsaka, saingy miankina amin'ny mason'ny tsirairay avy ny fampiharana.
Fa mazava ho azy, avy amin'izay lazainao, ny fepetra dia zavatra tsy ampy anao.
Valiny tamin'i Hasta los güevos de Argentinos
Samuel Marchan Fernandez De Di dia hoy izy:
Toy izany koa ho ahy
Valiny tamin'i Samuel Marchán Fernández De Di
Toy izany koa no mitranga amiko, tsy haiko satria rehefa apetrakao ny k no baiko voalohany dia mametraka ahy tsy hita
Izany dia satria tsy ho mpampiasa faka ianao, ka tsy hiorim-paka.
aaa dia hoy izy:
Ahoana no hamakazahana?
Arturo_jose3 dia hoy izy:
Valiny amin'i Arturo_jose3
Salama tsara. Manana ny findaiko miorim-paka, ary ao amin'ny menio dia manana ny fampiharana "Superuser" aho, avy eo ao amin'ny emulator dia nasiako "su" ary mivoaka ilay "Permission nolavina".
louiskonde dia hoy izy:
Tsy mbola niorim-paka araka ny tokony izy, zavatra mitovy amiko no nitranga ary tsy maintsy ataontsika indray izany
Valio i Luiskonde
Miriam Entenza dia hoy izy:
na avereno indray.
Valiny tamin'i Miriam Entenza
alexriojito dia hoy izy:
Apetrako tsirairay isaky ny miditra ny lakile, ary avy eo tsy azoko ilay kaody, misy mahalala ny antony tsy hivoahany, azafady
Valiny tamin'i Alexriojito
Torohevitra roa raha toa ka mahasoa amin'ny olona iray io. Voalohany indrindra, farito fa ny boky fampianarana dia tonga lafatra ary nohazavaina tsara. Nahita olana vitsivitsy izay vitako tamin'ny famahana fanadihadiana iray aho:
1.- Miaraka amin'ny W7 dia vitako ny nisintona ny mpamily rehefa nampifandray ilay terminal, saingy tsy nekeny ho disk drive izany, na dia nasainy nanao izany aza (bara mitsivalana midina ao amin'ny terminal android…). Izany dia nahatonga ahy tamin'ny rindrambaiko miorim-paka hijanona amin'ny voalohany ary tsy hanao na inona na inona.
Ny nataoko dia ny mampifandray azy amin'ny Windows XP, apetraho amin'ireo mpamily avy amin'ny tranokala ofisialin'i Samsung ny rindrambaiko tompona ary miasa izy ary afaka miorim-paka.
2.- Nisy komandy tsy nahomby raha vantany vao tapaka, chmod 555 manokana, tsy maintsy ho chmod 555 *. *
3.- Rehefa miditra ny kaody mamoha, na eo aza ny fanondroana fa diso ny kaody dia mandeha tsara izy io.
Ireo lesoka rehetra na zavatra hafahafa ireo dia nanjo ahy nandritra ny 3 nataoko tamin'ny Android OS 2.3.5
MANKASITRAKA ANAO IZAO
NA INDRINDRA, MISAOTRA MISY, IZAY VOALOHANY
Manome alalana ahy foana io
ary nataoko izay rehetra lazainy.
Tokony hojerenao fa voasoratra daholo ny zavatra nolazaiko taminao tao amin'ilay lahatsoratra, famantarana tsotra na habaka iray no afaka manome anao hadisoana amin'ilay dingana.
Amin'ny "azy" voalohany dia efa nametraka izany ho ahy izy.
Sadrona dia hoy izy:
Toy izany koa no nitranga tamiko ... misy vahaolana ve?
Mamaly an'i Sadron
Viviam Rios Chavez dia hoy izy:
Azo atao ve fa aorian'ny famoahana azy dia tsy mandeha amiko ny fifandraisana Internet izay nifanarahana tamiko na Wi-Fi? Misaotra anao
Valiny tamin'i Viviam Rios Chavez
Nahavita izany tao amin'ny toeram-piantsonana roapolo teo ho eo aho ary mbola tsy nanana olana mihitsy.
Hamarino tsara fa hamerina ny folder EFS anao
bryanstuardo95 dia hoy izy:
Tena mety amiko izany, misaotra! Tsy maintsy narahiko fotsiny ny dingana tsirairay, ny fanajana ireo elanelana, ireo teboka… ..etc IT WORKS !!!!!!!!!!!! 🙂
Valiny tamin'i Bryanestuardo95
Alejandro Rosales sary placeholder dia hoy izy:
Salama, efa vitako izay nolazainao, ary mivoaka hatramin'ny farany ny zava-drehetra, saingy avy eo miditra ny nomerao aho ary milaza amiko ny teny miafina diso, ary amin'ny farany dia mila laviko ary tsy misy .. tsy mandeha izany, nahoana ?
Valiny tamin'i Alejandro Rosales
Marcelo nuñes dia hoy izy:
Salama ireto dingana ireto raha mandeha amiko izy ireo
fa rehefa tonga eo
Mahazo ady hevitra diso aho fa nandika azy tsara, tsy fantatro izay hitranga, olona hanampy ahy
Valiny tamin'i Marcelo Nuñes
Tommetal Dela Morte dia hoy izy:
Toy izany koa no mahazo ahy… ampio izahay !!!
Valiny tamin'i Tommetal Dela Morte
Osunac dia hoy izy:
Toy izany koa no mitranga amiko Aissssss
Valiny tamin'i Osunac
tavio-sama dia hoy izy:
Manana olana aho rehefa manoratra ny baiko mkdir mamoha entana dia mahazo zavatra «tsy nahomby tamin'ny famaharana», misy ny fisie ... Mihevitra aho fa avy tao no nahitako ny lesoka satria taorian'ny zavatra rehetra voalaza «tsy hita» sy «lavareny tsy mety» sy ny teny toa ity ary tsy manome isa ahy izany ... Adikao sy apetaho ireo baiko ary omeko ny didy tsirairay izay ampiako ... inona izany ???
Mamaly an'i taviosama
Salama indray ... Namaha ny olako teo aloha aho, efa manana ny kaody ary efa vitako ny dingana rehetra ary tsara ny tambajotra telcel raha mandeha izany, fa rehefa apetraka amin'ny orinasa hafa aho (iusacel) dia tsy manontany ahy mihitsy izany ho an'ny teny miafina rehetra ... milaza amiko «voasakana ny tamba-jotra» fa tsy manome ahy safidy hametraka teny miafina na aiza na aiza…. inona no tokony hataoko ??
Vladdracko dia hoy izy:
tsara, rehefa apetrakao ny baiko farany (cat /sdcard/unblock/mits/perso.txt), fa tsy omena ahy ny kaody ,, ary milaza izy hoe: »tsy misy rakitra toy izany», misy mahalala ve izay azoko atao?
Valiny tamin'i VladDracko
mjosek33 dia hoy izy:
Salama, rehefa mampifandray ny mini galaxi-ko amin'ny pc aho, toa hitako fa misy fanavaozana ny kies, apetrako ny fanavaozana ary "voasakana" ny sela. Napetrako tao anaty fitanisana satria tsy fantatro raha ampiasaiko tsara ilay teny ... inona no mitranga amin'ny telefaona finday dia manana efijery mainty izy, ary sarin'ny telefaona finday sy PC ampiarahin'ny teboka ary misy teboka miantsoantso eo anelanelany. Noho izany dia nijanona ary nilaza tamiko ny orinasa fa olan'ny rindrambaiko izany ary tsy afaka manamboatra izany izy ireo. Raha misy olona afaka manampy ahy "hamelombelona" azy dia tiako ny findaiko ary tiako hamerina azy io. Misaotra anao.
Mamaly an'i Mjosek33
Saoud-22 dia hoy izy:
salama jereo raha miditra amin'ny maody downling ny finday ary manandrana mametraka vintana rom vaovao
Valio amin'i Saoud-22
Lebron dia pufo dia hoy izy:
Misaotra betsaka, tonga lafatra ny zava-drehetra tamin'ny voalohany.
Valio amin'i Lebron Pufo io
mmatias55 dia hoy izy:
Fa maninona hoy ianao no ahodino ny finday raha te hampifandray azy amin'ny solosaina, toa anglisy isika, tsy mifankahazo, miteny espaniola, azafady
Ny root dia mahazo alalana amin'ny superuser.
Alefaso amin'ny Samsung Mobile
Ant Rivas dia hoy izy:
Salama francisco, maninona aho rehefa manongotra ny samnsun mini tsy mahazo ny sarimihetsika amin'ny saribakoly android? Manana ny efijery miaraka amin'ny samnsun aho ary manao kianja misy tandindon'ny pad sy asterisk izay mametraka ramdum eo afovoan'ny kianja .. ary noho izany dia mijanona tsy afaka miditra amin'ilay superuser aho .. valio xf
Valiny tamin'i Ant Rivas
Mampiato ny deboka amin'ny usb ve ianao?
Inona ny kinova amin'ny Android anananao?
aber ... avelao aho hiteny aminao ... Te-hanodina azy io aho mba hamafana ny lamina tsy tadidiko ... tsindrio ny lakilema hanodinana azy ary nivoaka tsara teo amin'ny efijery superuser izy, ary tamin'ny hadisoana nomeko ny safidy voalohany, rebort sistem izao .. Heveriko fa ... ary avy eo ary nanandrana nanery ny lakilema ho an'ny superuser aho ary tsy afaka .. Azoko tamin'ny hafatra voalohany ilay nolazaiko anao? Ufff .. maika aho tsy mahita vahaolana .. ary tsy afaka manao n'inona n'inona cntesta xfavor
Ny hany zavatra azonao atao dia ny mametaka indray miaraka amin'i odin
Tamin'ny 11/09/2012 21:55 PM, «Disqus» nanoratra:
Rguzman_78 dia hoy izy:
Miarahaba anao, nanaraka ny dingana rehetra aho ary tsy nanana olana raha tsy niverina.
Rehefa namerina aho dia somary miadana fa ara-dalàna, dia novonoiko mba hanovana ilay puce, avy eo nanomboka aho ary tsy nangataka ny lakilen'ny hidin-trano na nanana signal.
Novonoiko ilay izy sao misy lesoka fa tsy manomboka intsony izy io, mampiseho ny efijery maintin'ny galaxy mini fotsiny.
Efa nanandrana namerina ny OS tamin'ny alàlan'ny fanindriana ny bokotra home + herinaratra aho nefa tsy nisy na inona na inona nitranga.
Valio amin'i Rguzman_78
Nigoruelo dia hoy izy:
Manaraka ny dingana rehetra aho. Efa imbetsaka aho no nanao azy ary amin'ny farany ny isa omeny ahy dia lisitra zerô kely misy hash amin'ny farany
Valiny tamin'i Nigoruelo
francisco fanontaniana, ity lahatsoratra ity dia manompo ahy ihany koa ho an'ireo terminal voasakana noho ny halatra, satria hitako ny iray nefa voasakana. Ampio aho
Asdfsadfas dia hoy izy:
Fanontaniana iray, amin'ny laharana fahatelo dia apetaho ny chmod 555, saingy tsy misy dikany izany.
Io dia ho: chmod 555 hamaha. Tsia ?? Te hanome alalana an'io fampirimana io ve ianao? Tsy te-hanao an'io aho raha tsy manazava izany fanontaniana izany amiko ianao, misaotra ny zavatra rehetra
Valiny ho an'i Asdfsadfas
Chmod 555? Iza no omenao alalana? Raha ny baiko ihany no misy?
Jose Manuel Sorando dia hoy izy:
ny baiko feno dia chmod 555 hamaha
Valiny tamin'i Jose Manuel Sorando
Diso ny baiko fahatelo. Tokony ho: chmod 555 mamoha
Izy io dia ampiasaina hanomezana alalana ny fampirimana mamoha.
Nanandrana azy tsy nisalasala aho fa miharihary, fa ny olona tsy mahalala Linux kosa no ilazako azy.
taloha fa ray dia hoy izy:
Salama daholo mandra-pahatongan'ny ampahan'ny saka /sdcard/unblock/mits/perso.txt tsy haiko izay mitranga fa milaza amiko izy fa tsy mila fanampiana
Mamaly an'i yeray peropadre
Tsara daholo, mandra-pamerenako indray hiditra ny kaody 8-digit. Avy eo rehefa manomboka indray aho dia mihantona eo amin'ny efijery maintin'ny GALAXY mini GT-S5570 ilay finday ary tsy miala eo izy.
Mariamar143 dia hoy izy:
tsy maninona nefa somary sarotra ary isa lehibe loatra
Valiny tamin'i Mariamar143
Locofusion dia hoy izy:
tsy misy rakitra na lahatahiry toy izany… maninona no mivoaka izany ny olona… ..help
Valiny amin'i Locofusion
misaotra efa nataoko 100000 isa… ..man misaotra
avereno ny finday amin'ny dingana farany hanovana ny karatra ary tsy hivadika izay tokony hataoko izany
Mitovy tsy misy valaka amiko izany. Amin'ny fotoana hanovana ny karatra dia tsy manomboka intsony izy io, amin'izao fotoana izao dia manana finday milanja taratasy aho.
Tsy nanao zavatra araka ny voalaza ao amin'ny lesona ianao, satria namoaka fantsona mihoatra ny folo miaraka amin'ity fomba ity aho ary tsy misy olana.
misy fomba hamahana ny olana ve raha tsy hirehitra izao?
Andramo apetraka amin'ny maody fampidinana izany ary alefaso ny firmware voalohany nakarina avy amin'ny pejy finday sam mampiasa ny odin tool
Tamin'ny 04/09/2012 12:24 PM, «Disqus» nanoratra:
Halefako hamboarina izy io satria mbola manana antoka
Miezaha mampirehitra firmware misy voalohany, mba tsy ho tsapan'izy ireo fa namaka sy nanodinkodina azy ianao
Tandremo ny paos rehetra, mihinana litera lehibe sy kely, ary koa ny habaka, raha misy zavatra tsy mivoaka araka ny voalaza eto, dia ianao no manao zavatra tsy mety.
Rafael Torres dia hoy izy:
Nahodiniko nandritra ny roa herinandro aho ary niasa tsara ho ahy izy io, izao dia manana sim telo avy amin'ireo orinasan-telefaona finday any Chile, tsy manana olana aho fa nangataka zavatra bebe kokoa toa ny fahafahako manana internet maimaimpoana ananako. namana iray manana fitaovana mitovy no nandehanako tany amin'ny firenena Vesino ary nomeko asa be izy na dia tsy mahay mandanjalanja na dia amin'ny tenako aza nefa tsy manana internet maimaim-poana satria manana vatofantsana tambajotra ity fitaovana ity dia tsara ny mampiasa ny kahie entiko ny samsung gt5570l raha misy afaka manampy ahy azafady ny mailakao rafael_viki@hotmail.com azonao atao ve ny mandefa ahy ny angona ayi mialoha misaotra
Mamaly an'i Rafael torres
Tsy fantatro izay ataonao mba hametrahana azy fa miala sasatra aho, efa imbetsaka aho no nanao izany ary tsy nanana olana, toy ireo mpampiasa BLOG. Raha diso ny fampianarana dia tsy nisy iray izay ho tonga tsara.
Na izany na tsy izany, ireo izay manana olana dia manandrana manamarina raha manana fidirana amin'ny maody fampidinana izy ireo, raha izany dia azonao atao ny mamerina azy io amin'ny odin sy ny firmware voalohany.
Tamin'ny 07/09/2012 01:14 PM, «Disqus» nanoratra:
Manome toky anao aho fa ireo nosakanana, tsy midika hoe tsy mahay mamaky teny sy manoratra na zavatra hafa toa izany isika. Heveriko fa samy mahay manavaka ny habaka amin'ny fisotroana isika rehetra. Na izany na tsy izany, misaotra tamin'ny fandraisana anjara, isika rehetra izay manandrana manao zavatra toy ny fanafahana ny finday nefa tsy manam-pahalalana amin'ilay lohahevitra, dia tokony ho fantatsika fa misy risika izany.
Izahay no saosy dia hoy izy:
mandeha amin'ny vady tonga lafatra !!!.
Tsy fantatro izay hataon'ny ambiny fa nohazavaina daholo ny fomba tokony hatao.
Mamaly an'i Somoslasalsa
piratepmc dia hoy izy:
Voalohany indrindra, misaotra betsaka tamin'ity fampianarana mahafinaritra ity, narahiko izany ary tonga lafatra ny zava-drehetra afa-tsy ao amin'ilay kaody omeny ahy aorian'ny baiko baiko /sdcard/unblock/mits/perso.txt
Raha esoriko ny zerô dia manana tarehimarika 7 sisa aho, ohatra iray:
12345 # 123456700000000000000000000000
Hanisa ny pad ve aho amin'izay?
Mahazo aotra amin'ny farany ve aho?
Dokotera 7 ihany ve no ampiasaiko
Mamaly an'i Piratapmc
Heveriko fa tokony hahazo 0 ianao hatramin'ny farany, saingy tsy azoko antoka hoe nahoana izany no tsy mbola nitranga tamiko
Tamin'ny 13/09/2012 11:24 PM, «Disqus» nanoratra:
Azo antoka, ny fametrahana aotra amin'ny farany dia mameno ny kaody deactivation ary niasa lavorary.
Misaotra betsaka amin'ny fanampianao
jujo1965 dia hoy izy:
Misaotra betsaka amin'ny tutorial, tsotra sy mahomby.
Azavao amin'ny hafa fa tsy haiko hoe inona no ataon'izy ireo hampihenana finday.
Julytuning37 dia hoy izy:
Hey jereo nahita sansun galasi mini aho mangataka mailaka ikontra sign ino se kual dia kisiera mahalala komo kitarlo afaka mamoaka azy kontuayuda betsaka misaotra eny afaka manampy zerlo
Valiny tamin'i Juliotuning37
Anontanio dia hoy izy:
misaotraisisisisisisiismas betsaka 😀 tamin'ny alalàn'ny fampianarana anao dia afaka namoha ny sela aho misaotra 😀
Mamaly an'i sora
olo-masina dia hoy izy:
Salama, efa narahiko ny dingana rehetra ho an'ilay taratasy, nomenao ahy ny kaody, nanaja azy aho ary tsara, vonoiko ny mampiditra karatra avy amina mpandraharaha hafa ary tsy manomboka izany, mbola tratra ao amin'ny efijery samnsung ihany io. . Inona no ataonao?
Mamaly an'i Csantos
Joseph_4_6_90 dia hoy izy:
Salama, azoko ny kaody mamoha fa rehefa apetrakao ny SIM vaovao hametrahana ny PIN ary avy eo ny kaody mamoha dia voasakana ny finday ary tsy mandalo ahy avy amin'ny efijery an-trano samsung izy, ka tsy afaka mamita ny fizotrany ary aza velomina ara-dalàna ny finday. Inona no azoko atao ??
Mamaly an'i Jose_4_6_90
jmltortes dia hoy izy:
Azonao atao ve ny manamboatra azy? Izany koa no nitranga tamiko
Mamaly an'i Jmltortes
Claudm18 dia hoy izy:
Toy izany koa no nitranga tamiko, mba misy manana valiny amin'izany?
Nanandrana nametraka rom vaovao avy amin'i odin aho .. saingy tsy izany ... ... Tena kivy aho ...
dlazaro76 dia hoy izy:
Rehefa mihazakazaka mount -o nosuid aho, ro, nodev -t vfat / dev / block / stl5 / sdcard / hamaha dia mahazo ny lesoka amin'ny mount: argument tsy mety, inona no azoko atao hamahana ilay olana? manana mini galaxy miaraka amin'ny gingerbread 2.3.6 aho. MISAOTRA
Mamaly an'i Dlazaro76
Elken dia hoy izy:
Salama e ! Nanaraka ny dingana rehetra aho ary nomeny ahy ny kaody manokatra fa rehefa miditra ao amin'ny sim an'ny mpandraharaha hafa aho dia mbola mahazo ny hafatra ihany: ny hidin'ny tambajotra arahan'ny padlock ary ny teny mandà noho izany tsy mamela ahy hiditra ilay kaody, avy eo manao ahoana ianao? manontany azy ny kaody ve aho ???
Valiny tamin'i Elken
Alex de la Rosa dia hoy izy:
Toy izany koa no nitranga tamiko. Manana telefaona finday avy any Mexico aho ary tsy afaka namoha ilay izy. Ny nataoko dia nampita izany tamin'ny Gingerbread tamin'ity boky ity https://www.youtube.com/watch?v=VRvcWz6xwuE (Nety tsara ho ahy izany saingy tsy tompon'andraikitra amin'izany aho noho ny antony mazava) ary rehefa napetrako teo aminy ilay puce Movistar dia nandefa ahy mivantana tany amin'ny efijery aho mba hametraka kaody iray ihany.
Valiny tamin'i Alex de la Rosa
Kiles2000 dia hoy izy:
Salama ho ahy izao rehefa mamadika ny finday aho dia tsy mivoaka hametraka ny pin
Valiny amin'i Kiles2000
Agmpcpimm dia hoy izy:
Mamerovero ny findaiko dia manongotra azy aho ary miditra amin'ny terminal napetrako fa tsy mahazo na inona na inona mihitsy aho
Mamaly an'i Agmpcpimm
matthewbayo dia hoy izy:
Tena mety izany fa raha mividy vera mampitombo ho an'ny isa mahafaly ianao hehe
Misaotra anao noho izany
Mamaly an'i Mateobayo
Tena tsara, androany nividy ny mini hanome ny sakaizako aho ary afaka adiny 1 dia efa niorim-paka izy io, flash vaovao ary maimaim-poana toy ny rivotra. Misaotra anao.
GustavoJuan dia hoy izy:
Manaraka ny dingana rehetra aho. Faka aho ary manome ahy ny kaody. Rehefa averiko indray ary apetrako ny karatra mpandraharaha vaovao dia tsy miseho ny efijery fampidirana an'io kaody io
Valiny tamin'i Gustavojuan
Astur_darling dia hoy izy:
Azonao hazavaina amiko ve ny momba ny tsy maintsy hongotantsika?
Ary ao amin'ny takelaka famoahana ny famoahana ny terminal izay apetranao »dia hiditra ity baiko manaraka ity», tsy azoko ny hiditra alohan'ny hidirana Enter.
Mamaly an'i Astur_darling
Zulaika Idalia Nava Bass dia hoy izy:
misaotra !!! Navotsako ihany ny mini galaxy ahy !! Nahazo hadisoana vitsivitsy aho saingy noho ny tsy fahitako litera sy zavatra kely toa izany, raha toa ka manao zavatra toa azy izy ireo dia mijanona ny boky! Ny sela miasa 100% misaotra!
Valiny tamin'i Zulaika Idalia Nava Bajo
avy eo manoratra cd / sddcar toy ny ace hidina
Grenadetoxy dia hoy izy:
Vitako io ary tena mety amiko, eny, ny fanajana ny litera rehetra, ny habaka / sy ny rehetra…! dia ny tsy cd / sddcar fa cd sdcard. Mirary ny soa indrindra
Mamaly an'i Granadatoxi
Shiqa_lays_ dia hoy izy:
ams napetrako »ny» ...
dia nivoaka izy
su: tsy hita ..? inona no dikan'izany 🙁
Mamaly an'i Shiqa_lays_
roberrodriguez dia hoy izy:
Salama aho nahita mini galaxi afaka mamoaka azy tsy misy sim voalohany satria mangataka pin amiko izy ary tsy ho very aho
Valiny tamin'i Roberrodriguez
Nanandrana namaky mkdir aho fa nahomby ny valiny tamin'ny famohana, misy ny fisie, mety noho ny fanaovanao izany raha tsy misy ny sim?
Alex Data dia hoy izy:
disculap dia miditra ihany aho fa rehefa zazalahy avy amin'i mkdir mamoha dia mivoaka fa misy ny tsy fahombiazana ary marina daholo na manampy azafady
Mamaly an'i Alex Data
inona ny baiko tsy mivoaka?
Valiny tamin'i Paula
tulalipana dia hoy izy:
Misaotra, niasa tonga lafatra ho ahy izy io.
Valiny tamin'i Tulatulipana
Efytalian dia hoy izy:
Salama aho efa manana ny laharana na izany aza rehefa apetrako ny sim an'ny mpandraharaha hafa dia tsy mangataka amiko ny kaody famaha izy; Mety noho ny nanovako ny rom ho an'ny telefaona? inona no tokony hataoko?
Valiny tamin'i Efytalian
Dhillg8 dia hoy izy:
Miaraka amin'ny lakileny hanamafisana ny fisokafany dia milaza amiko tsara ny zava-drehetra ho ATORATRA aho, fa rehefa apetrakao ny SIM dia mamela ahy hahita fifandraisana avy amin'ny karatro SIM aho fa tsy mamela ahy hanao antso ary toa miantso vonjy maika fotsiny, inona no azoko atao manao? Miandry ny valinteninao aho tsy ho ela ary afaka manampy ahy ianao. Ny zavatra hafa rehetra dia tonga lafatra, izany antsipiriany lehibe izany ihany. Misaotra anao.
Mamaly an'i Dhillg8
Gragonflymanu dia hoy izy:
misaotra betsaka, nahazo
Valiny tamin'i Gragonflymanu
Misaotra betsaka, ianao no ronono, azoko tsy nisy olana izany
Ricardo_ozzy dia hoy izy:
tena tsara, raha miasa 100% misaotra
Valio i Ricardo_ozzy
Juanjo Weapon dia hoy izy:
Ataoko tsara ny dingana, miditra tsara ny baiko, manova ny sim aho fa manontany ahy ny kaody manokatra .. maninona no tsy izy?
Valiny tamin'i Juanjo Arma
Vincent_287 dia hoy izy:
Ola Nodinihiko ny findaiko ary tsy hitany ny SIM ary tsy nangataka ahy ny kaody famaha izy, tsy hitany akory na dia ny SIM aza misy valiny ????
Valiny tamin'i Vicente_287
Nanaraka ny dingana rehetra tamin'ny taratasy aho ary tsy mahamarika ilay SIM tany am-boalohany ary kely kokoa ny an'ny an'ny mpandraharaha hafa, izao ny finday dia velomina mivantana ary tsy mangataka kaody hamaha, fanampiana azafady !!!!
Namaka azy aho, ary rehefa apetrako ny baiko: SU tsy misy miseho !!
Miasa tanteraka izy io, atsaharo ny fanaovana adaladala, raha tsy mety aminao izy dia noho ianao nanao ny tsy mety ary dia izay. Mila manaja ny ZAVATRA REHETRA izay voalaza ianao ... habaka, tsipika, tsipika miforitra sy izany rehetra izany
Paulita dia hoy izy:
Francisco, izany rehetra izany dia tokony hatao amin'ny telefaona mifandray amin'ny solosaina? Ny programa Android Terminal Emulator koa alaina amin'ny solosaina? Misaotra ny valin-teninao, olom-baovao aho amin'ity.
Valiny tamin'i Paulita
Vita avy amin'ny finday ny zava-drehetra
Tamin'ny 09/11/2012 22:53 PM, «Disqus» nanoratra:
Misaotra anao mamaly haingana; Hanandrana aho hilaza aminao.
Chmod555Unlock dia hoy izy:
Ny fanovana ny baiko fahatelo "chmod 555" ho "chmod 555 unlock" dia miasa tanteraka na dia tsy mandeha aza ny "unmount ...", mahavariana fa marina. Misaotra betsaka.
PS: Raha apetrakao «su» ny varavarankely superuser dia tsy miseho na mamerina «su tsy hita» izay midika fa manana ny «superuser» napetraka ianao fa TSY MISY FOTOTRA MOBILE, noho izany dia esory miaraka, ohatra , ny Unlock Root fa io no nampiasako.
Manantena aho fa nanampy tamin'ny fanomezana zavatra. Ciao!
Valiny amin'ny Chmod555Unlock
Raha diso ny fanoratanao? Inona no hatao? Misaotra mialoha
Angeliita_1992 dia hoy izy:
Tena ilaina tokoa, misaotra !!
Mamaly an'i Angeliita_1992
Steak_85 dia hoy izy:
Misaotra betsaka!! Novahako fotsiny !! fanazavana tsara be! fiarahabana
Mamaly an'i Filetito_85
Lujan0103 dia hoy izy:
miarahaba miseho ny afisy ary tsy mamela ahy hiditra na aiza na aiza no ataoko ilay afisy milaza fa ny fampiharana fanombohana samnsung process com.sec.android.app.twlauncher dia nijanona tsy nampoizina manandrana indray manery ny press akaiky eo.
Valiny tamin'i Lujan0103
radish dia hoy izy:
Vita tsikelikely ary niasa tanteraka izy io, misaotra ny fandraisana anjaranao, ny mahita ireo habaka atoroiko handika sy hametahana ao amin'ny takelaka dia toa mazava kokoa. Misaotra betsaka !!!!!!!
Mamaly an'i rabalo
Misaotra ny lesona narahiko azy araka ny nametrahanao azy ary afaka namoaka azy aho na dia tsy nilaiko aza izany fa tiako hosedraina mba hiasa tanteraka misaotra
HERINDRAM-BOKY dia hoy izy:
TENY ROA, LENTE-LSEE MANKASITRAKA
Valiny amin'i GLASSES
Kemula dia hoy izy:
tonga lafatra, misaotra betsaka, nanompo ahy tamin'ny telefaona maromaro izy io.
Valiny tamin'i Kemula
An dia hoy izy:
Miaraka amin'ny fihemorana hafahafa, fa tena tsara. Misaotra!
Mamaly an'i An
XztnCs dia hoy izy:
Misy olana ve raha manana ny kinova android amin'ny 2.3.6 aho?
Mamaly an'i Xztn Cs
David_Blanco_Garcia dia hoy izy:
Rehefa apetrako ao amin'ny terminal ny su ary mahazo miditra aho dia tsy hita, inona no tsy maintsy ataoko?
Valio i David_blanco_garcia
Angelo D Tuman dia hoy izy:
´Hahomby 100% izao misaotra betsaka AngelloDtuman -Peru
Valiny tamin'i Angello D Tuman
Yair dia hoy izy:
hello, hainao ve ny manao an'izany amin'ny Huawei U8180
Mamaly an'i yair
manu13 dia hoy izy:
Nataoko daholo araka izay nolazainao azy ary ny zavatra rehetra ok, rey olona, ​​hajao ny habaka ary alohan'ny hanoratanao tsara fa tsara ary araho ny dingana tsirairay, izany no fomba tsara indrindra handehanan'ny zava-drehetra. Misaotra!
Mamaly an'i manu13
Salama… ary ny fisie 'perso.txt' aiza no ahazoako azy ??…. Rehefa miditra ny baiko 'cat /sdcard/desbloqueo/mits/perso.txt' aho dia mahazo ilay hafatra 'tsy misy rakitra na lahatahiry toy izany' izay manondro fa tsy misy ao anaty lahatahiry ity rakitra ity ...
Miandry ny valinteninao aho
txujavi dia hoy izy:
Ny zavatra mitovy amiko dia nitranga tamiko, hay fa aorian'ny saka dia misy toerana iray, dia nesoriko tamin'ny andrana voalohany nataoko, ny faharoa, miaraka amin'ny habaka tsy misy olana, nanome ahy ny kaody ary navoakako tsara ny telefaona. Manantena aho fa izany zavatra izany ihany no nanjo anao dia azonao izany
Mamaly an'i txujavi
Nicocra27 dia hoy izy:
Tsy mandeha amiko ny habaka fa mitovy ihany ny ...
Valiny tamin'i Nicoccra27
lorenzochorro dia hoy izy:
Nahavita nandalo ny fizotrany rehetra aho ary nanoratra ny kaody tamin'ny taratasy iray. Rehefa averiko indray ny finday dia tavela eo amin'ny efijery fanombohana Samsung aho. Izay azoko atao
Mamaly an'i lorenzochorro
Pikemale dia hoy izy:
HENO HENO "INSULTO" IZAHAY MOBILE IHANY NO NATAO ARY TAMIN'IZAY TAMIN'NY NITENYO, NITSOKO AZY AMIN'NY BATIKY AMIN'NY ODIN ARY ROM (2.3.6) ARY NANOMBOHANA IZAO FA TSY MANDEHA INDRINDRA NY MOBILE, TSY HANANA LAZAO IZAO ARIA IANAO ARIA IANAO PQ FA HATRANY TENA MAFY, manoro hevitra aho fa TSY MAINTSY HANAO IZAO NA MBOLA HANJANANA TSY MISY MOBILE, TSY FANTATRAO IZAY HATAONAO AMIN'ILAY TANANA «INSULTAZO» …… ..
Valiny amin'i Pikemacho
chetos ... dia hoy izy:
Tonga lafatra, misaotra betsaka.
Tsy maintsy nanova ny tsipika 555 aho araka ny filazan'izy ireo ao amin'ny fanehoan-kevitra.
Valiny amin'ny chetos ...
Erramun dia hoy izy:
Misaotra anao navotsotra tsy nisy olana na dia nandany vola kely aza aho satria afaka afangaro mora foana amin'ny dingana fahefatra, lava indrindra, fa amin'ny fahefatra manintona
Valiny tamin'i Erramun
Caprice dia hoy izy:
Nanjary tsara be tamin'ny voalohany! Misaotra betsaka fa efa nanandrana izany tamin'ny hafa aho ary tsy nisy milllll ary indraindray misaotra anao
Valiny tamin'i El Capricho
roropa76 dia hoy izy:
Tonga lafatra ny zava-drehetra, misaotra
Mamaly an'i roropa76
J. Sanchez dia hoy izy:
Misy fomba tsotra sy tsy misy biriky. Navoakako soa aman-tsara ny Galaxy Mini S5570 an'ny Yoigo. Ireto ny fizotrany:
1: ho faka (jereo ity lahatsoratra ity http://www.htcmania.com/showthread.php?t=230297 )
2: mametraka boaty be atao. Manaova busybox ary avy eo manome anao mametraka ianao
3: apetraho ny fampiharana GalaxyAceUnlock
4: mihazakazaka mamoha
5: soraty ny kaody mamoha
6: apetraho ny mpandraharaha iray hafa
7: apetaho pin pin
8: ampidiro ny kaody manokatra
Raha manome anao hadisoana amin'ny kaody izy dia aza atao ambanin-javatra fa mitovy ihany ny asany.
Tsy misy atahorana ny fanaovana biriky ny telefaona na dia misavoritaka momba ilay kaody aza ianao.
Manantena aho fa mety aminao toa ahy. Mirary ny soa indrindra
Valiny tamin'i J.Sanchez
Voalohany indrindra dia misaotra an'i J.Sanchez.
Ny fomba etsy ambony dia tsy nanome ahy ny baiko an-tendrombohitra, manome fahadisoana izany, misy zavatra tsy mety, saingy tsy haiko hoe inona izany.
Vitako ihany tamin'ny farany ity fomba ity. tsara izany dia lasa hybrid. Nametraka ny "SuperOneClick" hanongotra ny telefaona aho. jereo eto ary ampiasao ity: https://www.androidsis.com/como-rootear-tu-terminal-android-con-superoneclick/
Ny toerana misy azy hoe safidio ny universal, nampiasa auto aho. Izany dia miteraka fampiharana antsoina hoe "SuperUser" hapetraka fa tsy mandeha. Io dia mamela ny fidirana amin'ny ambaratonga mpanara-maso na mpitantana ny rafitra Android.
Vantany vao vita dia avereno indray ilay finday ary nataoko tamin'ny sim izay miasa hatramin'ny niandohany. Nametraka mivantana izay nolazain'i J.Sanchez aho, »apetraho ny fampiharana GalaxyAceUnlock»
Manatanteraka azy ianao ary miantso ilay fampiharana teo aloha ary mangataka zon'ny mpanara-maso, manaiky azy ianao ary miverina amin'ny rindranasa GalaxyAceUnlock, tsindrio ny bokotra mamoha ary miandry ny kaody, mety maharitra 1-2 minitra ho ahy izany, naka ahy latsaky ny 30 ″.
Avy eo averinao indray ny sim vaovao ary ampidiro ny isa nomena anao, dia nanome ahy hadisoana mamoha izy io, saingy nanaiky aho ary MAHASA IZY !! Miaraka amin'i pepephone sy yoigo aho dia nanandrana ary mandeha izy ary avy tany Telefónica izy io.
jualma dia hoy izy:
Mahazo lesoka aho rehefa miditra ny baiko cd / sdcard dia mahazo ny ccd / sdcard tsy hita
Mamaly an'i jualma
Raha nosoratanao toy ity hafatra ity, ara-dalàna raha mahazo ny lesoka ianao ... jereo ireo habaka, tena zava-dehibe izy ireo.
tena tsara fa namoaka ny samsung ace aho
Louis C. dia hoy izy:
Tena mety izany misaotra anao namako !!!!!!!
Valiny tamin'i Luis C
nofantsihina teo dia hoy izy:
tonga lafatra. Ny fikarakarana tsara ny syntax dia tsara ho ahy. MISAOTRA
Valiny tamin'i Clavao
Navoaka !!! Misaotra betsaka anao amin'ny tutorial, fanazavana fotsiny, tokony hanitsy ny lahatsoratra amin'ny fanovana ny dingana fahatelo ianao ary hametraka ilay zavatra marina izay 'chmod 555 unlock', raha tsy izany kosa tonga lafatra.
BRUJILLALEN dia hoy izy:
TSY MBOLA NANADY TAMIN'NY KARATRA OPERATORA INDRINDRA aho, FA MBOLA NITRANGA TSARA NY ZAVATRA REHETRA, TSY MANAMBA NY TONTOLO IZAO, KA MIARAKA ANAO, ARY IREO MPANJAKA ANAO ... IZAO NO TSY HANORATRAN'NY SORATRA NY DIDY, SPACES, COMAS, BARS, ETC ... MIARAHABA TSARA ARY REHEFA apetrako ny SIM an'ny OPERATOR hafa dia marina daholo, HEH, HEH.
Valiny amin'i BRUJILLALEN
trikitrake dia hoy izy:
Salama, tsy mandeha ny telefaona
Mamaly an'i trikitrake
Tsy maintsy nanao zavatra tsy nety ianao.
Tamin'ny 05/02/2013 12:55 PM, «Disqus» nanoratra:
Nanao ny zava-drehetra aho ary rehefa mandeha mamadika telefaona aho dia tsy mandeha amiko izany.
inona no hitanao lasa.
misy olona afaka manampy ahy
Hihinana toerana na zavatra sasantsasany ianao, tsy maintsy mijery ny fidirana amin'ny maody fampidinana ary manaparitaka firmware am-boalohany miaraka amin'ny odin, ao amin'ny Androidsis dia manana fampianarana feno momba ny fomba hirosoana ianao.
Tamin'ny 05/02/2013 13:01 PM, «Disqus» nanoratra:
Rafa Exposito dia hoy izy:
REHEFA mametraka ny tendrombohitra aho -o nosuid, ro, nodev -t vfat / dev / block / stl5 / sdcard / hamaha
ALOHA FOANA AHO: MOUNT: ARGUMENT INVALIDA
Valiny tamin'i Rafa Exposito
Andrew Weiss dia hoy izy:
Misaotra betsaka, nanampy ahy izy io, narahiko ny dingana manaraka ary mandeha aho, rehefa niditra ny kaody farany, namerina ny telefaona dia mandeha izy, misaotra sy arahaba.
Valiny tamin'i Andrew Weiss
Fairy dia hoy izy:
Nataoko daholo izay nolazaiko ary rehefa napetrako ny teny miafina nomeko anao dia diso aho, ankehitriny amin'ny karatra teo aloha ary ilay iray hafa azoko fa tsy manana tambajotra aho
Salama, ataoko tsara ny zava-drehetra, fa rehefa averiko indray dia tsy mangataka kaody akory izy io, antso vonjy maika fotsiny
Keltoi dia hoy izy:
Izany zavatra izany no mitranga amiko, ary tsy azoko atao ny mangataka ilay kaody famaha. Misy manana vahaolana ve?
Valiny tamin'i Keltoi
juancry dia hoy izy:
Te hanao izany ao amin'ny mini 2 aho
Mamaly an'i juancry
salama dia namoaka samsung mini gt-s5570 aho fa manana samsung mini gt-s5570l hafa ary mahita fa diso mount: argument tsy mety dia ataoko daholo araka izay voalaza etsy ambony ary notsapaina in'arivony ary tsy misy zavatra mety satria efa nataoko tamin'ny samsung aloha ary raha navotsotra fanampiana
mount -o nosuid, ro, nodev -t vfat / dev / block / stl5 / sdcard / hamaha rehefa manao izany aho dia rehefa mahazo ny lesoka ataoko? Ataoko foana ny fizotrany na dia diso aza io hadisoako io? »
Jcestal dia hoy izy:
Amin'ny maha-Root ahy, ary maka tahaka ara-bakiteny ireo baiko dia tsy nanana olana aho
Valiny tamin'i Jcestal
Tonga lafatra, tamin'ny fotoana voalohany nivoahany. Ho ahy dia tena ilaina tokoa ny maka tahaka ny baiko hapetraka ao amin'ny Android Terminal Emulator mankany amin'ny NOTOT BLOCK, mba hahitana tsara ireo habaka, izay tsy dia miavaka tsara amin'ny tranonkala.
ny famerenana ireo habaka dia miasa tanteraka
ZADKIEL dia hoy izy:
HEY MANKASITRAKA NY MENNN, MIARAKA AMIN'NY HERITRERA REHETRA, AZA ATAO MBA AZA ATAO FA TSY AZO INDRINDRA NY KOMENY NEGATIF ​​FA tadidio fa misy karazan'ondry REHETRA AO AMIN'NY TRANON'NY MPAMORA ISIKA, MISAOTRA ANAO, TENA MAHASOA NY TUTORIAL….
Valiny amin'i ZADKIEL
GABO dia hoy izy:
LINUX COURSES BOYS Fantatro fa be dia be ity, saingy niasa ho ahy izy io ary misy APRT notsoahako dia CHMOD 555 TSY MISY
Valio amin'i GABO
Kuko dia hoy izy:
Eny, aorian'ny famotsorana azy dia tsy avelany hanao antso aho na handray azy ireo. Iza no afaka manampy ahy?
Mamaly an'i kuko
Jose Antonio Huerta dia hoy izy:
Misaotra betsaka, niasa lavorary ho ahy izy io, THANKSSSSSSSSSSSSSS
Mamaly an'i jose antonio huerta
Sebastian Colmenero dia hoy izy:
POST MAHAY !! MIarahaba anao dia nataoko ihany io rehefa manazava azy ianao ary miasa
MISAOTRA INDRINDRA ANAO!!
Valiny tamin'i Sebastián Colmenero
lauraaaaa dia hoy izy:
Heveriko fa exo in-droa mihoatra ny indroa aho nefa tsy nosokafako dia natomboka indray satria tsy fantatro izao fa mahavita azy aho ???? Mila vahaolana aho yyyyyaaaaaaaaaaaaaaaaa
Mamaly an'i lauraaaa
Bueenass dia mamoaka ny mini galaxy Samsung-ko ary hita fa raha manao ratsy mihoatra ny in-droa ianao nefa tsy mamerina azy dia tsy mandeha intsony na zavatra toa izany dia nanandrana aho ary tsy misy azoko atao.
Ny hany azoko atoro anao anao dia ny mankanesa any sammobile.com ary misintona ny firmware am-boalohany sy ny fitaovana handefasana azy hahitana raha hamaha ity olana ity na dia hitako aza fa sarotra izany.
Notefeninao ve ny folder efs?
izany dia dia hoy izy:
vendrana ianao ... amin'ireo baiko ireo dia tsy maka tahaka na inona na inona ianao, mamindra ny rakitra, ary eo no manomboka ny olana, ankoatry ny tsy mahita dingana 2 amin'ny emulator terminal ianao ..., noho izany, Raha tsy manaraka ny dingana mankany amin'ny taratasy ianao dia hamatsy vola ny finday ...
Nisy nieritreritra ny hijery ilay imei ve rehefa namoaka azy toy izao? Azo antoka fa mihoatra ny iray na ny imei no novaina, na mivantana, efa lasa ...
Miasa io fomba io, saingy tsy azo antoka. Ny fomba azo antoka dia ny manisy kopia ny rakitra.
Io no mila ataonao mametaka copie raha tsy mijery akaiky ny toerana anaovanao azy ...
Mamaly an'i cio
Rehefa avy nanaraka ny dingana tsirairay aho rehefa tonga teo amin'ny famohana mkdir dia tsy nahomby ilay mkdir hendry tamin'ny fisakanana, fie misy qee agooooo ??????
Misaotra betsaka!!! ianao no tsara indrindra, miasa tanteraka na ny miorim-paka na mamoaka azy !! Misaotra anao
Salama, narahiko ireo dingana arak'izay voalaza ao, fa rehefa namerina ilay finday aho dia najanoko ny famakiana ireo sim. Inona no azoko atao amin'ity tranga ity?
faobe dia hoy izy:
Namoha mini galaxy samsung tamin'ny 01/04/2013 tsy nisy olana. Tamin'ny voalohany dia diso aho; voalohany satria adinoko ny mampiditra ny karatra SD avy eo rehefa nandika ny sasantsasany tamin'ireo baiko aho. Raha vantany vao namboarina ireo bibikely roa ireo dia niasa lavorary izy io. Fanamarihana iray: Raha ny amiko aorian'ny # rehefa mandray ireo isa valo, RAHA tsy maintsy maka 0 aho; satria raha tsy izany dia nanana isa 7 fotsiny izy; mandra-pahatsapako izany antsipiriany izany dia nanandrana fanandramana roa tsy nahomby aho.
Mamaly an'i masegar
taorian'ny dingana ireo dia namoy ny imei ny galaxy mini-ko, miaraka amin'ny vokany izay tsy misy ekena mahalala ahy. Inona no azoko atao izao?
Voanjo ^ 3 ^! dia hoy izy:
Tsy azoko ny alalana mpanelanelana .-.
Valio ny voanjo ^ 3 ^!
peric dia hoy izy:
Nandeha tsara ny zava-drehetra fa rehefa ampidiriko ilay karatra sim vaovao dia tsy hita ilay varavarankely manontany ahy ny pin'ny karatra. Telefaonina novidiana tany Espana ary any UK aho. Moa ve aho tsy maintsy mampandeha ny kaody sim amin'ilay karatra alohan'ny hampidirako azy ao anaty telefaona hanokafana? 🙂
Valiny tamin'i Peric
markoriveira dia hoy izy:
ianao no mahay indrindra!! Nijery fampianarana 100 aho ary tsy nisy niasa ho ahy… samsung galaxy mini 2.3.4 tamin'ny fotoana voalohany. misaotra triatra!
Mamaly an'i markoriveira
Miasa amin'ny S3 koa ve izy io? 😀
ahoana no ahodinanao ...
Mamaly an'i sam
Undercover69 dia hoy izy:
Ami niasa ho ahy izy io tamin'ny fotoana voalohany, misaotra anadahy
TSARA, apetraho aho: ARGUMENTA INVALIDA
REHEFA mametraka aho:
AHOANA NO HAMONANA ANAO ???
Manuel Angel Lopez Valverde dia hoy izy:
Andao hojerentsika ny momba ireo bibikely kely hitako fa tsy misy olona, ​​tsy misy olona maneho hevitra amin'ny pejy misy azy io. Imbetsaka aho no sendra fitaovana izay tsy manaiky ireo kaody "generic" ireo. Fa maninona? Satria tsy ireo foana ny reperitoara izay ahariharinao, dia manome hevitra momba ny vahaolana mety amin'ny lesoka maro amin'ireo kaody aho.
- cd / sdcard (hahita hafatra kely ianao mametraka «/ mnt / sdcard», jereo tsara ity)
- mkdir / mnt / sdcard / mamoha
- chmod 555 / mnt / sdcard / mamoha
- mount -o nosuid, ro, nodev -t vfat / dev / block / stl5 / mnt / sdcard / hamaha
- saka /mnt/sdcard/unblock/mits/perso.txt
- Raisinay ny kaody, tadidio fa tarehimarika 8 izy, raha ohatra ny kaody dia 123456 # 1234508000000000000000000000000 ary raisinay ny isa 1234508, tsy hiasa ho antsika izy io, ka mandray ny 0 manaraka, ka mamela 12345080.
- ataontsika ny dingana rehetra voalaza hamaha ny telefaona.
Manantena aho fa nanampy anao, satria zavatra mitovy amin'izany no mitranga amin'ny olona maro, ary tsy mahita valiny izy ireo, noho izany, efa nitandrina aho nanala azy, arahabaina daholo.
Valiny tamin'i Manuel Angel Lopez Valverde
filazana dia hoy izy:
Navoaka !!! Misaotra betsaka anao amin'ny
tutorial, teboka iray fotsiny dia tokony hanova ny lahatsoratra ianao
manova ny dingana fahatelo ary apetraho ilay zavatra marina izay 'chmod 555
mamoha ', raha tsy izany tonga lafatra.
Valiny amin'ny QUOTING
Diadora dia hoy izy:
Navoaka !! Tsara. Torolàlana tena tsotra. Misaotra anao!!!
Mamaly an'i Diadoro
Lavorary !!!!! Nandaitra tamiko io rehefa navoaka !!! Misaotra betsaka !!!!
jack dia hoy izy:
Raha miasa ny fomba rehetra, dia ho an'ny faka fotsiny dia misy ny pronlme ao amin'ny youtube, misy fomba tsara kokoa hanodinana ny telefaona ary avy eo eto ny fomba famohana ny finday
Mamaly an'i jac
SALAMO REHETRA, andao jerena raha misy afaka manampy ahy. Mandiso ahy izany amin'ny torolàlana 4 milaza amiko fa tsy misy ilay rakitra ary tsy haiko intsony ny manao azy. Misaotra betsaka.
Valiny amin'i CAROL
Misaotra noho ny vaovao antitra nitahiry vola be ary manana izany ho tombony, hahahahahaha.
Misaotra betsaka, mandeha tsara io
Chegaru dia hoy izy:
Francisco, raha nanao kopia diso ny kaody mamoha aho ary tsy nekena, azoko atao indray ve ny mamerina ny fizotrany rehetra hanamarinana ireo isa valo? Kely loatra ireo isa ka tsy takatra mazava
Mamaly an'i Chegaru
miasa amin'ny maodely android hafa?
MIASA Lavorary. Misaotra betsaka noho ny fandraisan'anjara, tao anatin'ny minitra vitsy monja dia namoaka ny Samsung Galaxy Mini GT-S5570 aho nefa tsy nanana olana tamin'ny fanarahana ireo dingana tao amin'ny fampianarana anao.
Ireo izay manana olana amin'ny fidirana amin'ny baikon'ny Linux dia manome torohevitra azy ireo aho mba handika azy ireo amina tonian-dahatsoratra (ohatra ny Word), mba hahitana izay toerana misy sy toerana tsy misy. Ary ho an'ireo karazana olana hafa, jereo ny fampahalalana momba ny baiko Linux ary noho izany dia fantaro tsara izay atao ary zahao izy.
Hadinoko ny milaza fa marina fa ny tsipika nanovana ny zon'ny fidirana dia tokony ho toy izao:
"Chmod 555 mamoha"
Beans_Culiaos dia hoy izy:
Tsy hitako ny mampiditra ny kaody manokatra, ny isan'ireo sim fotsiny no hitako fa tsy ny manokatra uu HELP 🙂
Mamaly an'i Porotos_Culiaos
salama misy mahalala fa maninona no tsy miasa miaraka amin'ny Movistar io raha vao navoakako raha misy mahalala izay hatao dia antsoy aho amin'ny 687314838 na mandefasa mailaka amiko mazallu@hotmail.com Misaotra mialoha
Zennder dia hoy izy:
Misaotra indrindra majete. Nety tsara izany. Avy amin'ny fandoavana ary efa miasa amin'ny jazztel. Misaotra hatrany, tsara fampidirana.
Mariho araka ny nolazain'ny mpiara-miasa iray teo fa tsy mahita ilay teny hoe "mamoha" ianao aorian'ny baiko chmod 555
Valiny tamin'i Zennder
Salama Francisco, tsy manana ny sim taloha aho, ilay iray mazava ho azy tiako hamboarina ihany, azoko apetraka ve ity ary ataoko tsara? Misaotra betsaka
Gianella dia hoy izy:
tsy afaka mamoha modely samgung gt - s5300t azafady mba ampio
Valiny tamin'i Gianella
Jakoba dia hoy izy:
Rehefa manomboka ny finday dia toa tsy manoratra ny kaody manokatra, inona no hataoko?
Mamaly an'i jacob
schere cross dia hoy izy:
Misy vokany ve ny famotsorana ny s4mini? maharary ve ny famantarana?
Mamaly an'i schere cruz
Fernando Alves Arias sary placeholder dia hoy izy:
Salama, ho hitanao fa manana galaxy mini gt-s5570 aho ary te hamoaka azy, namaka tao amin'ny kinova 2.3.6 aho ary amin'ny fanarenana sy ny zava-drehetra, ny tena marina dia hamoaka azy amin'ny fomba taloha miaraka amin'ny baiko ao amin'ny terminal, ary rehefa nametraka ny folder tsy namela ahy handika fotsiny ilay rakitra stl5 tao amin'ny pc aho ary tao no nanokafako izany tamina programa antsoina hoe wingimage ary nandeha tany amin'ny txt aho ary nosokafako ary nivoaka ny kaody, nandika aho izy ary asio sim hafa fa tsy misy ... milaza fa avoaka io dia manaiky izay sim rehetra, fa tsy mamela ahy hiantso na hiantsoana, hafatra sy internet eny fa tsy misy antso. inona no mety tsy nety nataoko? Tena mila fanampiana aho ... fiarahabana sy fisaorana.
Valiny tamin'i Fernando Alves Arias
Navoaka aho nefa tsy niorim-paka dia tsy mamaky ny sim an'ny orinasa hafa
Zeosy dia hoy izy:
Hiasa amin'ny Samsung Galaxy mini 2 ve izy ?????
Valiny tamin'i Zeus
Silva Pau dia hoy izy:
Salama Q Teng Q Aser Ho an'ny Q Ny Cell Andee dia Samsung Galaxy Mini. Rehefa mirehitra izy dia tsy mandoa vola, mirehitra Samsumg ary misy jiro miseho ao aoriany, fa tsy mirehitra.
Valiny amin'i Silva Pau
jadiez98 dia hoy izy:
Nahavita ny dingana tonga lafatra rehetra aho, tsy hita intsony ny karatra sim vaovao. Miverina indray ary mitohy toy ny teo aloha, nefa tsy mahita ny karatry ny mpandraharaha hafa
Mamaly an'i jadiez98
Samsung Galaxy S3 feno firmware misy